Waxaad khiyaameyneysaa iyo cryptocurrencies, midowga wuxuu umuuqdaa runtii lama huraan? 1xBit samee iyo sidee. Tani waxay ka dhigaysaa madallada sharadka isboorti waqti xaddidan, khamaarka, keno iyo inbadan oo nool,...
Unibet waa guri ku yaal Iskandaneefiyanka Paris oo uu aasaasay muwaadin iswiidhish ah 1997 kuna saleysan Malta. Laga soo bilaabo dhalashada, mahadsanid Anders Strom, si weyn ayaa loo wanaajiyey, primero...
Sharadka cayaaraha Bwin waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Spain. Wuxuu kafaala qaaday dhacdooyinka isboorti ee waaweyn, sidoo kale kooxo waa weyn sida Real Madrid, Juventus, Manchester...
888 waxaa lagu aasaasay 2008 maantana waa mid ka mid ah ciyaaraha guryaha ugu muhiimsan adduunka, maxaa yeelay waa qayb ka mid ah 888 Haystayaasha dhaqamada kala duwan. Con más de una...
Betfair waxay noqotay mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan garoonnada ciyaaraha tooska ah ee Spain. Con las ofertas de deporte no sólo platafoma París también encontrar zonas...
Betsson waa mid ka mid ah kuwa ugu waa weyn uguna khibradda badan ciyaarta ciyaaraha tooska ah ee Paris. Sweden iyo dhalashada aniga 50 años de experiencia...
Circus Casino wuxuu galay suuq weyn oo Isbaanish ah, leh awood weyn iyo gacan weyn oo xiiso leh Gaming1. Es el mayor operador de telefonía móvil en...
Interwetten waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee bixiya khamaarka isboortiga ee Yurub. Shirkadda Austrian waxaa lagu asaasay 1990 por Wolfgang Fabian; wakhtigaas isagoo arday ah oo dhaqaalaha ah,...
Qeybta isboorti ee isboortiga ee internetka Egasa Luckia waa hogaamiye kooxeed Isbaanish ah taariikh dheerna ku leh garoonka tan iyo markii ay la shaqeynayeen casinos, juegos de azar y salas...
Suertia sharadka ayaa ku dhashay gudaha 2012, in kasta oo horey loogu yaqaanay shirkad heegan u ah ciyaaraha paris-ka internetka. Eduardo Losilla goor dambe ayaa imanaysa, tal vez el más conocido y...